Ny Harbour Club Saint Lucia dia nanendry talen'ny sakafo vaovao
Home » Lahatsoratra farany farany » People » Ny Harbour Club Saint Lucia dia nanendry talen'ny sakafo vaovao
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • Vaovao Mafana Saint Lucia • Tourism • Vaovao isan-karazany
sary an-doha kristianina 2
The Harbour Club, miorina eo amin'ny Rodney Bay mahafinaritra any Saint Lucia, dia nanendry an'i Cristian Rebolledo ho talen'ny sakafo sy zava-pisotro ary Chef mpanatanteraka ho an'ireo trano fisakafoanana efatra ao amin'ny hotely.
Cristian Rebolledo dia nahazo diplaoma tamin'ny Ivon-toeram-pitsaboana malaza any Etazonia. Ny fahaizan'i Rebolledo dia niroborobo teo ambany fitantanan'ny sasany amin'ireo chef tsara indrindra eran'izao tontolo izao toa an'i Joan Roca i Fontané sy Ferran Adria. Ny niasa tany Eropa, Amerika atsimo, Azia atsimo atsinanana, Etazonia, ary Karaiba dia nanolotra fomba miavaka amin'ny fahaizan'i Rebodello mahandro sakafo, mamela azy hahafehy tsara sy hanandratra ny fomba fahandro rehetra. Tamin'ny 2014, notendrena handray ny loka James Beard malaza i Rebolledo ary nanana ny tombontsoa manokana mahandro tao amin'ny James Beard House any New York City.
“Ny fiavian'i Chef Rebolledo isan-karazany momba ny sakafo dia nahatonga azy hifanaraka manokana amin'ny fanaraha-maso ireo trano fisakafoanana efatra ananantsika eto amin'ny The Harbour Club, indrindra ny 14North vao nosokafana,” hoy i Lester Scott, Tale Jeneraly. "Faly izahay fa hiaina ny vahininay ny fahaizan'i Chef Rebolledo manam-pahaizana momba ny fahandroana sakafo sy ireo zavaboary mahandro vaovao izay hoentiny eo ambony latabatra."
Rebolledo dia nanomboka ny asany tany Chile niasa ho an'ny Sheraton raha mbola nanatrika fampianarana tao amin'ny INCAP Technical Institute. Niala tany Chili izy tamin'ny taona 1996 mba handeha ho any Eropa ary nahazo asa niasa tamin'ny nahandro nahandro tao El Bulli, trano fisakafoanana misy kintana 3 an'i Michelin an'i Chef Ferran Adria. Miaraka amin'ny tsiro ny fisakafoanana tsara efa voarindra mafy, tsy ela dia niasa ho Chef Executive Sous tao amin'ny lapan'ny Mpanjakan'i Espana i Rebolledo. Vonona ny hamolavola ny fahaizany mahandro sakafo vaovao i Rebolledo ary niverina tany Chili tanindrazany izay nanokafany ny trano fisakafoany manokana ary nahatratra ny lohateny hoe trano fisakafoanana ambony any Chile. Ny fankalazana dia nahatonga azy hanana ny fanavahana ny iray amin'ireo chef amerikana latina 5 ambony nataon'ny The Latin American Chef's Association tamin'ny 2010.
Manaraka izany, ny asan'i Rebolledo dia nahita azy nifindra tany Karaiba izay toerana niasany ho Chef Executive ho an'ny marika hotely malaza eran-tany toa an'i Melia Hotels, JW Marriott ary Sandals. Talohan'ny nidirany tao amin'ny The Harbor Club dia nipetraka tany Providenciales niasa tao amin'ny Turks & Caicos Collection i Rebolledo izay niandraiketana ny asan'ny F & B ho an'ny fananana lafo vidy telo: Beach House, Alexandra ary Blue Haven.
Amin'ny maha talen'ny sakafo sy zava-pisotro ary Chef mpanatanteraky ny The Harbour Club, dia manara-maso ny asa any amin'ireo trano fisakafoanana efatra ao amin'ny hotely i Rebolledo: 14North, Julia's, the Sushi Deck ary Dockside Pizzeria